LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Zazakely telo naratra nazeran’ny moto niaraka tamin’ireo ray sy reniny
Zaza miisa telo niaraka tamin’ny ray aman-drenin’izy ireo nandeha scooter no niharan-doza, ny alahady teo. 4 novembre 2020
Tsy fantatra mazava na nandona ilay bajaj na nosongonin’ilay bajaj izy ireo, fa nianjera ilay moto ary niaraka nianjera izy dimy mianaka. Araka ny nambaran’ireo nahita dia samy mbola kely daholo ireo ankizy ireo, eo amin’ny dimy taona ny farany lehibe, telo taona eo ny ampovoany ary manodidina ny iray taona eo ny farany kely. Samy naratra ireo zazakely telo ireo. Ireo ray aman-drenin’izy ireo koa dia naratra be avokoa ary voatery nentina eny amin’ny tobim-pahasalamana.
Anisan’ireo fitaovam-pitaterana mahazatra eto Mahajanga ny kodiaran-droa. Amin’ny ora fidirana sy firavan’ny mpianatra no tena ahitana ireo ray aman-dreny maka sy manatitra ary mitondra ny zanany miisa roa, telo na efatra amin’ny kodiaran-droa iray. Matetika moa mandeha moramora ihany izy ireo ka tsy dia nahitana lozam-pifamoivoizana mikasika azy ireo loatra. Efa maro anefa ny mpampiasa lalana ankehitriny ary anisan’ny mpampiasa lalana tsy mahafehy sy mampihatra ny lalànan’ny fifamoivoizana ny bajaj na tuc-tuc fa mandeha “daoara” araka ny fitenenana fotsiny, misisika etsy sy eroa, misongona araka ny itiavany azy ary mandeha mafy ka matetika miteraka lozam-pifamoivoizana. Amin’ny ankapobeny dia tsy sarotiny amin’ireo taingin-telo na efatra na dimy ireo mpitandro filaminana eto Mahajanga, indrindra amin’ny ora fidirana sy fivoahan’ny mpianatra satria mahatsapa ihany koa ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny, tsy manana saran-dalana homena ny zanany inefatra isan’andro.
Na izany aza dia misy fepetra tokony horaisina ihany, izay azon’ny sampan-draharaha misahana ny fitaterana ao amin’ny kaominina apetraka miaraka amin’ny polisim-pirenena mba hiarovana ny ain’ireo ankizy tsy manan-tsiny entin’ny ray aman-dreniny amin’ny kodiaran-droa, mba hiarovana ny ain’izy ireo. Mety mikasika ny fiarovana toy ny aroloha, mety amin’ny fametrana ny fandehanana kodiaran-droa amin’ny olona telo farafahabeny, anjaran’izy ireo no mitady ny vahaolana sy mampihatra azy am-pijerena ny zava-misy iainan’ny ray aman-dreny maro.